တရုတ်တန်း မိသားစု - ဝီကီပီးဒီးယား
တရုတ်တန်း မိသားစုသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသော ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာလင် ယုတန်က ရေးသားသည်။ ၁၉၂၀မှ ၁၉၃၀ကြားကာလ နယူးယောက်မြို့ရှိ တရုတ်တန်းမှ ဖောင်မိသားစု၏ အတွေ့အကြုံများသဖွယ် ဇာတ်လမ်းဆင်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
အထက်ပိုင်းအရှေ့ရပ်တွင် ပင်မင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားသော တွမ်(စီနီယာ)သည် သူ့ဇနီး မေမေဖောင်နှင့် အခြားကလေးများနှင့်အတူ နယူးယောက်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိရာ တရုတ်ပြည်တွင် ကျန်ရစ်သော သမီးငယ် အီဗာနှင့် သား တွမ်(ဂျူနီယာ)တို့ကို နယူးယောက်သို့ လိုက်လာရန် စီစဉ်ရာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့မိသားစုသည် အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်ကာ ဒီမိုကရက်တစ်ကျင့်စဉ်များကို အောင်မြင်စွာ လိုက်နာခဲ့သည်။ သူတို့မိသားစုကို မနာလိုသည့် အမေရိကန်များက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုကို ကြုံရသည်။
အီတာလျံ-အမေရိကန်တစ်ဦးဖြစ်သော ဖလော်ရာသည် မိသားစုသို့ ချွေးမအဖြစ် ရောက်ရှိလာသည်။ အခြား ဖောင်မိသားစုဝင်တစ်ဦးသည် အာမခံအရောင်းစာရေးအဖြစ့ အောင်မြင်လာပြီး ရုပ်ဝတ္ထုများကိုသာ စိတ်ဝင်စားမက်မောသည့် နိုက်ကလပ်အကမယ်တစ်ဦးကို အရူးအမူးချစ်မိသွားသည်။
အဓိက ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သူ တွမ်(ဂျူနီယာ)သည် အဂ်လိပ်စကားကို လေ့လာသင်ယူရာ မိမိတို့ဘာသာစကားကို အလေးထားရကောင်းမှန်းမသိသော အမေရိကန်ကျောင်းသားလေးများထက် ပိုမိုထူးချွန်ခဲ့သည်။
၁၉၃၀ဝန်းကျင်တွင် ဂျပန်တပ်မတော်သည် တရုတ်ပြည်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရာ အယ်လစီသည် စစ်ပွဲတွင် ကူညီရန် တရုတ်ပြည်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။
တွမ်(စီနီယာ)သည် လမ်းဖြတ်ကူးနေစဉ် ကားတိုက်မိပြီး သေလုမျောပါးဒဏ်ရာရသွားသည်။ ကားဖြင့်တိုက်သူ၏ မိခင်ရောက်လာပြီး မိသားစုကို လျော်ကြေးငွေလာပေးရာ ပမာဏမှာ တွမ်(ဂျူနီယာ)တစ်ယောက် ကောလိပ်တက်ရန်အပြင် တရုတ်တန်းရှိသူတို့စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ပွဲလုပ်ရန်ထိပါ လောက်ငှစေသည်။
တရုတ်အမေရိကန်ပုံစံရေးသားမှုသည် ဝေဖန်ရေးဆရာများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ချန်လော့ချွာက စာရေးဆရာ လင်သည် ဖောင်မိသားစုကို အလုပ်ကြိုးစားသော တရုတ်လူမျိုးအခြေချနေထိုင်သူများအဖြစ် ပုံဖော်ထားသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ထိုကာလက ဝင်ရောက်အခြေချသူများအတွက် နောက်ထပ်လူသစ်မခေါ်နိုင်စေရန် ကန့်သတ်ထားသော ဥပေဒရှိသည်ကိုတော့ မျက်ကွယ်ပြုထားသည်ဟု ချန်ကဆိုသည်။
လင် ကိုယ်တိုင်သည် အမေရိကန်တို့၏ ခွဲခြားနှိမ့်ချလှောင်ပြောင်မှုကို ကြုံခဲ့ရသူဖြစ်သောကြောင့် ဝတ္ထု၏ ဖော်ရွေသောဟန်သည် တမင်လုပ်ယူထားမှန်းသိလျက်ကပင် အမှတ်သတိထားစရာအချက်ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ရစ်ချတ်ဂျင်းသည် လင် မူလရေးဖွဲ့ခဲ့သော လက်ရေးမူကိုရှာဖွေလေ့လာခဲ့ရာ အမေရိကန်တို့ကို လမ်းညွှန်ပြသသည့် တရုတ်-အမေရိကန်တို့အကြောင်း ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးရန် သူ၏ ထုတ်ဝေသူ ရစ်ချတ် ဝဲလ်ရှ်က လင်ကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟု သိလိုက်ရသည်။ ဒေးဗစ် ပါလမ်ဘို-လျူသည် ထိုကဲ့သို့သော အာရှအမေရိကန်များ(နောက်ပိုင်းတွင် "ခေတ်သစ် လူနည်းစုများ"ဟုခေါ်)သည် အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီသည် ကမ္ဘာ့စံဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီး ခေတ်သစ်သို့ အလျင်အမြန် အကူးအပြောင်းတွင် အမေရိကန်တို့ကို ရိုးရာစံတန်ဖိုးများကို သတိပြန်မူစေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
↑ Chinatown Family (New York: John Day, 1948; rpr. edited and with an Introduction by Cheng Lok Chua; Rutgers University Press, 2007).
↑ Introduction, Chinatown Family, xiii.
↑ Richard Jean So, “Collaboration and Translation: Lin Yutang and the Archive of Asian American Literature,” MFS Modern Fiction Studies 56.1 (Spring 2010), 49-51.
↑ David Palumbo-Liu, Asian/American: Historical Crossings ofaRacial Frontier (Stanford University Press, 1999), 156. 
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရုတ်တန်း_မိသားစု&oldid=320399" မှ ရယူရန်
၃၁ မေ ၂၀၁၆၊ ၁၀:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ မေ ၂၀၁၆၊ ၁၀:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။